Google Calendar yave kuenderana neiyo iPhone X uye dhonza uye udonhedze | IPhone nhau
Ivo vakomana vanobva kuGoogle, nguva nenguva vanotaridzika zvakanyanya seApple, kana isu tichitaura nezve iyo nguva inotora kugadzirisa kwavo kunyorera kuti vashandise zvitsva zveanoshanda masisitimu kwavanotungamirwa. Muenzaniso wakajeka muApple unowanikwa neFinal Cut Pro X application, chishandiso icho nhasi zvisati zvagadziriswa kuti zvienderane neMacOS High Sierra.
Google ichangoburitsa nyowani nyowani yeGoogle Calendar application kuti ishandise karenda yedu, chishandiso icho chinozopindirana zvizere neIOS 11 uye chimwe chezvinhu zvitsva izvo chinotipa mukushanda kwayo paIpad. Ndiri kutaura nezve dhonza uye udonhedze basa, imwe yezvinyorwa zvikuru zveIOS 11 zvechigadzirwa ichi.
Nekuda kweiri basa nyowani, tinogona kudhonza chero gwaro kubva kuG Suite application, senge Google Docs kumunda uko kwatinogona kuwedzera zvinongedzo muzviitiko zvatinogadzira. Zvinotitenderawo dhonza chinyorwa kubva kuSafari kune tsananguro yechiitiko, tisingafanire kuikopa uye nekuzoinamira muchiitiko chatiri kugadzira, izvo zvinoderedza zvakanyanya kugadzirwa kwemagungano neruzivo rwekuwedzera.
Asi nhau dzine chekuita neGoogle Chalenda hadzigumira pano, nekuti ivo vakatora mukana kuvhurwa kwekuenderana neIOS 11 ye chinja mushandisi interface kune iyo nyowani skrini fomati inopihwa neiyo iPhone X, kuitira kuti tikwanise kuwana zvakanakisa kubva mukushandisa tisina kusangana nematambudziko ekushanda, kungave neiri interface kana neicho chishandiso pachacho. Google yanga ichida kumirira painogadziridza iyi application kuti itange kubatanidza imwe, kugadzirisa ese maviri interface uye kuenderana matambudziko neApple nyowani yekushandisa sisitimu yemidziyo, iyo yatove mushanduro 11.
Google Calendar: kurongavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Calendar ikozvino inowirirana neiyo iPhone X uye dhonza uye udonhedze